Isixeko sase-Kuwait sibamba iintlanganiso ezingama-52 zoMbutho wabaPhathi boMoya baseArabhu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Isixeko sase-Kuwait sibamba iintlanganiso ezingama-52 zoMbutho wabaPhathi boMoya baseArabhu
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeKuwait Breaking • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Idolophu enkulu yase Kuwait City namhlanje yamkele intlanganiso kawonkewonke yonyaka wama 52 Umbutho weArab Air Airriers (AACO).
Kumsitho wokuvula, uMphathiswa wezeziMali wase-Kuwaiti u-Nayef Al-Hajraf uthe ngokubhekisele kuphuhliso olukhawulezileyo kwihlabathi, iinqwelomoya zase-Arab kufuneka ziqhubeke zivule iindawo eziphezulu ukunceda ukukhulisa uphuhliso oluzinzileyo lwehlabathi lama-Arab.
Uluntu lwama-Arab kufuneka lusebenzisane ukuphumelela kunye nokukhuseleka kwezoqoqosho ngokujongana nemiceli mngeni, ukoyisa ubunzima kunye nokukhuthaza umbono wentengiso eqhelekileyo yama-Arabhu, wongeze watsho.
U-Yousef Al-Jassem, ongusihlalo we-Kuwait Airways, uthe icandelo lezothutho lomoya wase-Arab yeyona njini iphambili kuqoqosho lwamazwe ase-Arab.
Imicimbi ebalulekileyo ibandakanya ukuthintelwa kokusebenza kwizivumelwano zenkonzo yomoya kunye nokukwazi kweenqwelo moya ukuba zidlale ngokupheleleyo indima yabo yezoqoqosho, utshilo.
U-Abdul Wahab Teffaha, unobhala jikelele we-AACO, uthe icandelo lezokuhamba ngenqwelomoya liye labona ukukhula kweepesenti ezintandathu kumanani abakhweli ukusukela ngo-2010.
Ukugcwala kwizikhululo zeenqwelomoya zaseArabhu kunyuke nge-avareji yonyaka ye-6.8 yepesenti ukusukela ngo-2010, wongeze watsho.